VONDRONA STAR Handray anjara amin�ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena
Handray anjara amin�ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena ny vondrona Star
. Anisan’ny antony nanosika azy ireo hanohana amim-pomba ôfisialy ilay hetsika « Salon de l’Industrie de Madagascar » andiany fahatelo tanterahina eny Tanjombato nanomboka omaly izany hahafahana mampiroborobo ny orinasa Malagasy rehetra. Nisy ny latabatra boribory niarahan’Andriamatoa Emmanuel de Tailly, tale jeneralin’ny vondrona Star niaraka tamin’ny sendikan’ny indostria omaly teny an-toerana. « Indostria, avokavoky ny fampandrosoana » no lohahevitra novoaboasana nahafahan’ny roa tonta nijery paikady hahafahana mampivelatra ny indostria eto amintsika entina hanaingana ny toekarem-pirenena. Tsiahivina fa manana mpiara-miasa manodidina ny 2.000 isa ny orinasa Star ankehitriny ka ny 99 %-n’ireo dia teratany Malagasy avokoa. Miara-miasa amina tantsaha manodidina ny 20.000 ihany koa izy ireo, toy ny ao Vakinankaratra, Amoron’i Mania, Matsiatra Ambony, ary DIANA. Malagasy avokoa no mampidi-bola ho azy ireo izay mahatratra hatrany amin’ny 14 miliara Ariary isan-taona.